4 Skincare Efrata A Ga-eji Naanị n'abalị - Akpụkpọ Anụ
4 Skincare Efrata A Ga-eji Naanị n'abalị
egwurugwu nka na nka
Nwere ike iji oge gị na moolah na buru ihe kacha mma nlekọta anụ ahụ na ngwaahịa. Ma olee uru ha bara ma ọ bụrụ na ị naghị eji ha nke ọma? Otu ndudue nke ị na-achọghị ime bụ iji ihe ndị a PM siri ike n'oge ehihie.
Retinol bụ otu n'ime nnukwu anụ ahụ na-edozi akpụkpọ ahụ. Ọ na-alụ ọgụ dị na wrinkles, acne na pigmenti anụ ahụ dịka nke ọzọ. Nke a bụ n'elu anyị ndepụta nke Efrata iji n'abalị.
Ọtụtụ ga - eme ka ị kwenye na ihe kpatara nke a bụ n'ihi na retinol ga - eme ka anwụ na - acha ọkụ. Ọfọn, nke ahụ bụ eziokwu. Mana ezigbo sayensị kpatara bụ na Retinol na-echebara ìhè anyanwụ ozi. Egwuregwu UV nke anyanwụ na-eweghachi retinol. Yabụ, ọ bụrụ na itinye ngwaahịa retinol ma kpughee anụ ahụ ka ọ bụrụ ìhè, ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
AHAs na BHA bụ ihe ndị kachasị amasị anyị ma a bịa n'ihe gbasara ọgwụ na-ere kwa ụbọchị. Ndị a Efrata slough pụọ nwụrụ anwụ akpụkpọ mkpụrụ ndụ na-eme dullness na breakouts. Ha na-akwalite ntụgharị mkpụrụ ndụ ahụike. Na nkenke, ha nwere ike inye gị akpụkpọ ahụ na-enweghị ntụpọ nke dị nro dịka nwa nwa!
Ihe ndị dị ka glycolic acid na salicylic acid na-ebelata ihe nchebe mgbe ha na-arụ ọrụ. Ndị a bụ ihe na-eme ka akpụkpọ ahụ nwee okpomọkụ, ifufe na ọkụ.
Mmanụ oyi na-ekpo ọkụ nwere ọtụtụ nri na-edozi anụ ahụ. Ha na-arụ ọrụ dị ka ihe ncheta ma na-enyere aka n'ịrụ ọrụ ihe mgbochi ahụike. Ọtụtụ mmanụ dị n'ihu na-esonyekwa na mmanụ dị mkpa nwere uru anụ ahụ dị iche iche.
Otú ọ dị, mmanụ ndị dị mkpa nwere ike ibute mgbakasị ahụ mgbe ekpughere ya na okpomọkụ, ọsụsọ na ụzarị UV n'ihi methoxypsoralen nke ha nwere. E wezụga nke ahụ, mmanụ dị arọ nke ihu nwere ike ime ka unyi na nje bacteria rapara na anụ ahụ.
Nri abalị na nkpuchi ụra
Ude ndị a dị arọ karị ma hazie ka ha mepụta akwa na-edozi ahụ na akpụkpọ ahụ iji rụzie ya n’abalị. Nsonaazụ a na-edozi ma na-edozi ahụ, plump na rejuvenated akpụkpọ n'ụtụtụ. Ngwaahịa emere maka abalị ahụ apụtaghịkwa ìhè. Ha nwere ike igbochi ezoro ezo nke ọsụsọ na sebum n'ehihie na-eduga na mkpọchi na nkwụsị.
ụdị agba agba
oyi akwa ịkpụ maka ogologo ntutu isi
ọgwụgwọ ụlọ maka uto ntutu ngwa ngwa
ga-ekiri ihe nkiri di mma